Nagu saabsan - Shirkadda XinLan | Waxsoosaarka Qalabka 'Gearbox'
Tayo tayo sare leh, wax soo saar balaaran iyo qaab dhismeed jilicsan ayaa ah qodobada xoogan ee XL. XL waxaa la aasaasay sanadkii 1999, kuna takhasusay R & D iyo soosaarida sanduuqyada gear, geerka, wiishka, mootada iyo qaybaha dayactirka.
Waxaan ku siin karnaa xalka saxda ah ee codsiyada aan la tirin karin. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu adeegsadaa noocyada kala duwan ee birta, birta, macdanta, saxarka iyo warqadda, suuqa sokorta iyo khamriga iyo noocyo kale oo mashiinno ah. Iyada oo si xoog leh looga dhex muuqdo suuqa caalamiga ah, waxaan inta badan u dhoofinaa Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya. Tiirarkeena ayaa si adag loogu beeray raacdada hagar la'aanta ah ee heer sare, hal-abuurnimo iyo tartan. Saldhigga teknolojiyaddu wuxuu ku dhex muuqdaa hawlgalkeenna, oo leh qalabkii ugu dambeeyay iyo teknolojiyadda macluumaadka casriga ah.
Waxaa naga go'an inaan guuleysanno lammaane halkii aan ka ahaan lahayn alaab-qeybiye fudud. XL waxay noqotay alaab-qeybiye la isku halleyn karo, oo awood u leh inay siiso sanduuqyo gearbox oo tayo sare leh. Xaqiiqdii, waxsoosaarka oo dhan waxaa lagu horumariyey gudaha warshaddeena, sidaas darteed waxaa loogu gudbiyaa xakamaynta habka habboon.
Tayada wax soo saarka ee XL waxay kuxirantahay amniga iyo hufnaanta maamulkeeda taas oo kadhigaysa astaanteeda mid lamid ah kalsoonida iyo daahfurnaanta alaab-qeybiyeyaasheeda iyo macaamiisheeda. Samee heshiis wanaagsan, had iyo jeer la tasho xirfadleyda XL! Iyadoo 38 waayo-aragnimo sanado ah, waxaan kuu xaqiijineynaa isku haleynta iyo amniga ugu weyn ee alaabada iyo adeegyada labadaba.